UNWTO Nyika dzinoda Kununurwa uye Saudi Arabia Inopindura nemabhiriyoni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UNWTO Nyika dzinoda Kununurwa uye Saudi Arabia Inopindura nemabhiriyoni
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Emergency kufona yekushanya
911, chii chako emergency? Saudi Arabia iri kupindura kuWorld Tourism Crisis nemabhiriyoni emadhora ekushandisa. Imwe nyika irikuita zvinopfuura kutaura, irikushandisa mari yakakomba kununura nyika yekufambisa neyekushanya indasitiri - uye ichi hachisi chekutanga cheanopindura basa.
"Tiri kunyora nhoroondo nhasi!" Uyu ndiwo mushumo weyeredzi inopenya muindasitiri yekufamba uye yekushanya eTurboNews rakaburitswa muna Gumiguru 6 gore rapfuura.
Nyeredzi yaive mukadzi ane mukurumbira mukushanya panguva iyoyo, Gloria Guevara. Panguva iyoyo aive CEO we World Kufamba uye Tourism Council (WTTC). Akanga asingatomboziva kuti yakawanda sei yekufambisa uye kuzungunusa iyi indasitiri padanho rino chikamu uye nenyika isati yaona kuti angave nhasi.
Nhasi uno nzvimbo yeindasitiri yekufambisa neyekushanya iri kuuya pamwechete munzvimbo imwechete: Riyadh, Saudi Arabia. Izvi zvinogona kujekesa danho rekutanga reUNWTO (World Tourism Organisation) kutamisa dzimbahwe rayo kubva kuSpain kuenda kuSaudi Arabia.
Iyo ramangwana uye kupora kweimwe yemabhizimusi makuru epasirese anogona kunge ari muruoko rwenyika ine nyasha, Humambo hweSaudi Arabia.
Mutungamiri ane chiono cha2030 shure kweizvi zvese, kana akabudirira, achave Gurukota rezvekushanya kuSaudi Arabia, Hon. Ahmed Al-Khateeb. Mudzimai ari shure kwekuvandudzwa kwekushanyirwa kwepasirese anogona kunge ari aimbova CEO weWTTC, Gloria Guevara anobva kuMexico, uyo ave kushanda sachipangamazano wepamusoro negurukota rimwe chete, Ahmed Al-Khateeb.
G20 inogona kunge iriwo zuva rakapihwa Gloria Guevara basa, aisakwanisa kuramba. Chikonzero chaasina kuramba chingangodaro kwete chete muhoro wakagwinya unokwanisa kupihwa nenyika yeSaudi Arabia asi kuenderana kwake mukutanga patsva mafambiro nekushanya munyika.
Sezvineiwo, Saudi Arabia iri kushandisa padyo ne500 Bhiriyoni US-Dollar kuvaka iyo indasitiri yekushanya yepasi rese munyika yayo, asiwo mukubatsira nekudyara mune vamwe.
Nepo mari iri kuoma munyika zhinji kuisa kumashure kweiyi indasitiri, Saudi-yakapfuma Saudi Arabia inoona kudyara kwayo mukushanya kwete chete semukana wekukunda / wekuhwina asi semupiro kupasirese.
Muna Chivabvu 2021 WTTC pasi pehutungamiriri hwaGloria Guevara akabudirira mumusangano wekutanga wepasirese wevatungamiriri vezvekushanya kuti vaungane muCancun, Mexico.
Chinangwa chake saiye CEO weWTTC, sangano rine makambani makuru mukufamba nekushanya senhengo, kwaive kununura vakazvimirira. Guevara aitsvaga kubatana kwenyika dzese. Mhinduro yakauya kubva kuSaudi Arabia yakarongedzwa nekokero yekupinda G20. Iyi yaive nguva yekutanga vekudyidzana vega kukokwa.
Izvi ndizvo zvaidikanwa neindasitiri yakazvimiririra, kudyidzana-neruzhinji pamwe neavo vanogona kuita mutsauko.
Yekutanga musangano wepasirese wekushanya uye wekushanya kubva pakatanga COVID-19 yakaitika. Nzvimbo yacho yaive yeguta rekushanyira Cancun kuMexico. Anodada Gloria Guevara, aive nechinzvimbo cheSecretary of Tourism kuMexico kubva munaKurume 10, 2010, kusvika munaNovember 30, 2012, akapedzisa musangano uyu wakabudirira wekutaurirana uye tariro yenyika yekushanya.
Ndiani akange asipo muMexico, aive UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili.
Zurab zvakadaro haisipo muSaudi Arabia. Nepo chimiro chake chepamutemo ndechekuti haana nyaya nenyika inogarwa neUNWTO Spain, UNWTO yakatovhura hofisi yedunhu muSaudi Arabia.
Sekureva kwenhepfenyuro dzeSpanish, vamiriri muSpain neSaudi Arabia vanga vari vakabatikana kuseri kwechiitiko ichi.
Mazhinji enhengo dzeUNWTO, kunyanya nhengo dzeUNWTO nhengo dzisiri nhengo yedare repamusoro soro remubatanidzwa weUN vari kunzwa kusiiwa neUNWTO kubvira Zurab yatora chigaro. UNWTO haina vanhu, mari, uye zviwanikwa munzvimbo kuti iite musiyano wakakura kunhengo dzayo dzinobhadhara. Nhengo dzinowanzo sanzwa kwete kungosiiwa chete asi kuvezwa. Nhengo muUNWTO haina kudhura, kunyanya kana indasitiri ichienda mudambudziko rakaipisisa.
Zvese izvi zvinogona kusvika kumagumo kana UNWTO HQ ikaendeswa kuSaudi Arabia, uye ikamanikidzwa kushanda zvakare nemamwe masangano, senge WTTC. Kunyora kwatova pamadziro. Ose maviri UNWTO neWTTC anga atovhura kare hofisi yedunhu muRiyadh. Izvi zvakaziviswa paG20. Saudi Arabia yakagadzirira kununura uye zvakaretanga kushanya. Mamwe masangano ari mukuita, vazhinji vari kufunga nezvekuva netsoka muSaudi Arabia.
Mune ruzhinji, Spain yanga yakanyarara kusvika parizvino, asi sekureva kwakavimbika kuMadrid, Spain yakatsamwa. Kana wabatwa na eTurboNews, iyo Ministry of Tourism muMadrid haina kupindura.
Sekureva kwenhepfenyuro dzemuno muMadrid, vakuru muSpain vakurudzira kugadziridzwa kwenguva refu kweNWTO Headquarter iripo kuzadzisa zvikanganiso semugari wechigarire.
Izvi zvakadaro zvinogona kuuya zvishoma kunonoka, sezvo nyika dzave kugogodza pasuwo reSaudi Arabia kuti dzitsigire danho reUNWTO HQ kuHumambo.
Nyika dzese dzine nzara yekudyara uye mari kana zvasvika pakushanya, uye Saudi Arabia yakatopindura kune akawanda mafoni ekukurumidza.
Nyeredzi isingazivikanwe-yekuhwina mubairo kuWTTC Summit kuCancun yaive, pasina mubvunzo, gurukota rezveKushanya kubva kuSaudi Arabia. Nhume zhinji dzakataura eTurboNews chikonzero chikuru chekuti vaende kumusangano uyu kwaive kusangana nechikwata cheSaudi Arabia. Mari yakataurwa muCancun uye iri kutaura izvozvi.
Gurukota kubva kuSaudi Arabia rakagamuchira mibairo uye kucherechedzwa muCancun apo CEO weWTTC Gloria Guevara paakavhura mikova yezvatinoona nhasi.
Pane zvakawanda zvekuita, tpano pane kusarongeka uye matambudziko eTurboNews yakashumwa kubva kumusangano.
Pachave neramangwana idzva rekushanya rakafungidzirwa eTurboNews muparidzi Juergen Steinmetz ingangoita mwedzi wapfuura. Izvi zvitsva mangwana kana vamwe vanoti hutsva hutsva hunogona kunge hwakatotanga. Zvinoita sekunge Saudi Arabia iri kubuda semunhu anofungisisa uye mutungamiri.
Kune vazhinji vanotaura munyika yekushanya. Ivo vanosanganisira maCEO, makurukota, uye misoro yemasangano. Nyika yega yega ine dambudziko rakafanana: Dambudziko nderekuti hapana mhinduro, hapana mari yekutombokurukura mhinduro dziripo. Hapana anoziva kununura mafambiro uye kutashanya uye ayo mamirioni evabatiri anoshanda.
Iine shamwari muRiyadh, zviroto zvinogona kunyatso kuitika. Dzinogona kunge dzichidhura, asi pane mhinduro, uye Saudi Arabia yanga ichipindura mafoni e911 (112) seshamwari uye nyika inoita kunge ine hanya neiyi indasitiri, vanhu vanoshanda muchikamu ichi, uye nedzimwe nyika mune yakaoma mamiriro .
Mushure mezvose, nepo kushanya kusiri kutsva kuSaudi Arabia, kuvhura kwekushanya kwekumadokero kuhumambo kutsva, uye kubatsira iyo yepasirese nyika inogona kunge iri nyaya yetsika, asiwo mukana webhizinesi munguva refu yeumambo.
Takamira papi parizvino?
Tichitarisa padanho revashumiri, vashoma chete vashumiri vari kuyedza kuita mutsauko. Pakati pavo pane Hon. Edmund Bartlett anobva kuJamaica.
Bartlett uye Al-Khateeb Saina gwaro re intend munguva pfupi yapfuura, vese vakapfeka ngowani yaBob Marley. Bartlett yekushambadzira kwepasirese kutarisisa kwakachinja zvakajeka kuve Saudi Arabia.
G20 inogona kunge iriwo zuva Gloria Guevara akagamuchira kupihwa basa kubva kuSaudi Arabia, angadai asina kuramba. Icho chaivewo chiitiko apo Saudi Arabia yakavimbisa mabhiriyoni emadhora ekutsigira kwepasirese chikamu- uye iri kuzadzisa vimbiso.
Zvinofungwa nasachigaro weWorld Tourism Network:
Juergen Steinmetz, sachigaro we World Tourism Network uye mutariri we kuvakazve kufamba hurukuro yakati:
"World Tourism inoda rubatsiro, uye Saudi Arabia iri kupindura. "
Steinmetz, anova zvakare muparidzi we eTurboNews akawedzera: Saudi Arabia inofarira boka pasi pehutungamiriri hwe Hwake hwehumambo Hukuru Dr. Abdulaziz Bin Nasser Al-Saud.
"Izvo hazvisi zvekuratidzika kupa simba rekushanya kune imwe nyika. Ndezvekushanda nevaiti uye kwete vateveri chete nevatauri. Saudi Arabia muiti uye yakaratidza humwe hutungamiriri muindasitiri yekufambisa neyekushanya panguva yedambudziko iri kupfuura dzimwe nyika zhinji dzakabatanidzwa.
“Saudi Arabia inoisa mari yayo kumashure kwezvivimbiso. Ini handione chakaipa pano. Tourism icharamba iri indasitiri yezvakawanda zviitiko zvemudunhu. Mushure mezvose, kazhinji inowanzo indasitiri ine udyire uko nzvimbo dzinokwikwidzana.
“Kuva nenzvimbo yekushanyirwa munzvimbo imwechete izano rakanaka. Kana iyo inomiririra nzvimbo yepasirese yakadaro iine mari yekuita kuti ishande, zvinoita sekuhwina kune iyo nyika yekufamba uye yekushanya.
“Mukuve nenzvimbo yepasi rose yekushanya hazvireve kuti nyika ino iri kugadzira pfungwa yepasi rose kana hurumende yepasi rose yekushanya. Izvo hazvinei nechekuita nezvematongerwo enyika einotambira nyika. Pfungwa yenyika haizombotonga World Tourism. Sangano reUnited Nations semuenzaniso harisi sangano reUS, kunyangwe rakaitirwa muUnited States. Zvichida ndeimwe nzira yakatenderedza. Mukuunza nyika pamwechete nyika inogamuchirwa inogona kudzidza, kutora uye kuvhura kune matsva mazano uye tsika.
“Kuva neKushanya kuDzimbahwe panzvimbo imwe chete hakuzoshandure nzira dzakasiyana siyana dzinoonekwa nekushanya nekushandira munzvimbo dzakasiyana dzepasi. Iyo idiki nyika shure kwezvose, uye Zoom yakaratidza izvi kwatiri tese.
“Tinofanira kuombera Saudi Arabia nekupindura kwakawanda kudai 911. Nyika iri kutanga kupindura indasitiri yedu uye ine zviwanikwa zvekubatsira. Saudi Arabia pari zvino yanga ichipindura nenyasha uye ichinyemwerera. ”
Jane Folsom anoti:
Nyamavhuvhu 12, 2021 pa05: 53
Ndine urombo Juergen, handina kufadzwa kana kugutsikana kuti iri zano rakangwara. Nei Saudi Arabia ichimbundirwa ivo vachiri kupa zvibodzwa zvisiri pamutemo zvekuuraya nekukatanura nhengo ye Washington Post inoshuma timu..Jamal Khashoggie? Ko zvakadii nezvehurongwa hwekuparadza maWorld Trade Centres muNYC makore makumi maviri chete apfuura akaparadzwa muhumambo… uye zvakadii nekushomeka kwetsika yekuremekedza kodzero dzevakadzi?
Kungoti nekuti nyika ine mari-zvinoenzana nekunaka here? China ine mari yakawanda zvakare-sei hutungamiriri husiri kuvada?